Editorial: Qeybinta siman ee Golaha wasiirada waxey guul tahay Ummadda Somaaliyeed Madaxweynaha dalka Kenya oo diiday dalab uga yimid Madaxweyne Sheekh Shariif oo ahaa in ciidamo lagu tababaray Kenya loo soo diro Soomaaliya
Editorial: Qeybinta siman ee Golaha Wasiirada waxey guul weyn u tahay Ummadda Somaaliyeed
Sanadyaal ka bacdi markii dalka Soomaaliya lagu soo waday ummad takoor, musuqmaasuq, cadaalad xumo iyo xaqiraad ayaa bishaan Nofember 4, 2012, ayaa noqotay maalinta soo dhoweyn iyo xasuus mudan kaddib markii madaxda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka, ay go'aamiyeen in nidaamkii foosha xumaa ee 4.5 la aaso.
Runtii, malaayiin Soomaali ah oo habeen iyo maalin ka qayli jiray ummad takoorka 4.5 oo in muddo ahba la sharciyeeystay si awoodda dalka iyo hawlaha qaranka loo boobo.
Bisha Nofember 4eeda 2012, taariikhda Soomaalida waxay ku galaysaa maalintii sinnaanta iyo cadaaladda. Waa maalin, malaayiin Soomaali ah, intii ay arrinta tooska u qoseysay iyo taageerayaashooda, dabaal degi doonaan sannadkasta.
Waxaa kale la xasuusan doonaa oo taariikhda bog dahab ka gali doono, Madaxweynaha Soomaaliya, Mudane Prof. Xasan Shaikh Maxamuud oo arrintaan ka dhigay tilaabaddii ugu horeysay oo lagu saxay khalad soo jiray sanooyin badan.
Adduunka weli kama dhicin istakoorid noocaan ah. Dalka Maraykanka waxaa ka jiray midab takoor oo caddaan iyo madow ah iyo Koonfur Afrika sidoo kale Dawladdii caddaan ahaa waxay ku dhaqmi jireen nadaamka Apartheid oo caddaan iyo madow ahaa.
Ma dhicin nooca takoorka Soomaalida meel kale lagu dhaqmaayay. Dad isku diin, isku af ah, isku dhaqan ah, isku midab ah, oo si rasmi ah loo hirgeliyay. Soomaaliya kali ah laga yaqaan.
Amerika waxaa burburiyay takoorka ama addoonsiga, Madaxweyne Abraham Lincoln sannadka markuu ahaa January 1, 1863. Koonfur Afrika, Madaxweyne F.W. de Klark ayaa ku dhawaaqay February 1990, in Nelson Mandela laga soo saaro xabsiga kaddibna waxuu bilaabay in uu baabiyo midab takoorka.
Soomaaliya waxaa taariikhda gali doonaa oo bog dahab ku soo bixi doonaa, Madaxweyne Xasan Shaikh Maxamud oo si geesinimo ah ku jirto u go’aamiyay in nidaamka foosha xun ee 4.5 la baabi’yo.
Sida aad aragteen, dawladda cusub ee Ra’iisul Wasaaraha, Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid” oo toban xubno ah waxay ka kala yimaadeen shan beelood oo min laba ah. Taasi waxay guul u tahay sharafta sumcadda Soomaaliya iyo madaxda maanta hayso xukunka.
Wa Billahi at-Towfiiq.